Ikhaya » Iindaba kunye neehotele » Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts: #backtohappy
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts: #backtohappy
by UGianna Nolte - Iimbadada
Ezo ziphupha zemini zokuhamba ngenqwelomoya, ukusela ii-cocktails zetropiki, ukugcakamela ilanga kwiilwandle ezinesanti emhlophe, kunye nokonwabela ubunini babucala zizalisekise ekugqibeleni-kwaye konke kwaqala Iimbadada Grande Antigua. Ukuvula kwakhona okukodwa, kodwa ngesibindi okusebenze njengesibane sethemba ngekamva lokuhamba. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts #backtohappy ayisiyo i-hashtag nje.
Thatha idiphu kuyo yonke into ebandakanya ubunewunewu kunye nemfihlo kwiSandals Grande Antigua.
Ukubuyela eparadesi, iiSandals zazifuna ukuqinisekisa ukuba ukuvulwa kwakhona kwakhuselekile kangangoko kuzo zombini iindwendwe kunye namalungu eqela. Yiyo loo nto zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezili-18 zalisebenzisa Iiprotocol zePlatinam zoCoceko. Ngokuqeqesha bonke abasebenzi nokwenza imephu uluhlu lweendawo ezili-18 zokuthinta, uSandals Grande Antigua waba ngowokuqala ukubeka iiprothokholi ekusebenzeni kwaye aqale ukubuyisela iindwendwe kwindawo yazo eyonwabileyo kwiCaribbean.
Yayilithuba lokujika ekudala lilindelwe apho ukhenketho lweCaribbean luqale ngokusesikweni ukubuya kwaye iiSandals Resorts zazikhokela phambili, zinika abahambi isizathu sokuba baphinde babambe iipasi zabo.
Bamba iipasipoti zakho kwaye ubuyele kulonwabo olunyulu kwiiNdawo zokuHlala zeSandals.
Kwaye ngoku, iiSandals zinika wonke umntu izizathu zokufumana #BackToHappy.
Iindawo zokutyela ezili-12 eziBandakanyiweyo zivulekileyo ngaphezulu: #BackToHappy
Nyathela nakweyiphi na imbadada okanye Iilwandle Indawo yokuhlala ngoku kwaye uqinisekisiwe ukuba uya kufumana ulonwabo olusulungekileyo emva kokujonga nje ngeenxa zonke. Kukho uxabiso olunzulu ngolwandle oluhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka, ukuphuma kwelanga okucacileyo, izitiya ezenziwe ngobunono, kunye nokutshona kwelanga kweCaribbean. Ukonwaba kunokubonwa kukhanya kuwo onke amabala.
Thatha indawo yokuhlala echibini kwaye ujonge ukuphuma kwelanga ngokucacileyo Iimbadada kuNxweme oluseMazantsi nesiqingatha sakho esinye.
Umoya weCaribbean uphethe ivumba lokutya kwaselwandle okutsha kumhlaba onabileyo, iikhitshi zegourmet zibuyile emsebenzini zikhonza ezinye zezona ndawo ziphambili zokutya, izibini zivuselela uthando lwazo kwiindawo zazo zokugcina amachibi abucala, kwaye iintsapho azishiyi nto ngaphandle kweenyawo isanti. Zonke izinto ezintle zobomi ekugqibeleni zibuyile kwaye zingcono kunangaphambili.
Ukuhambahamba ngesandla-kwaye wonwabele lonke eloxesha losapho ku Iilwandle uNigril.
Amalungu eqela ayi-15,000: #BackToHappy
Naphi na apho ujonga khona, amalungu eqela abonwa encumile ngamehlo abo kuba bonwabile ngokunyanisekileyo ukuba babuyele ekwenzeni eyona nto bayithandayo-ukuhambisa iindwendwe ezikhethekileyo. Ukusuka kubahlohli be-diving abaqinisekisiweyo be-PADI® kunye ne-bartenders ekhethekileyo ukuya kwiingcali ze-Red Lane® Spa kunye nee-butlers eziqeqeshwe yiGuild of Professional English Butlers, 'ukubetha kwentliziyo' kweembadada ngoku kubetha ngamandla kunakuqala.
Amalungu eembadada alungele ukuhambisa iholide yeenkwenkwezi ezi-5 obuphupha ngazo.
Abapheki abadumileyo behlabathi babuyile endaweni yabo yolonwabo, abathengi abathandekayo baxuba ezona cocktails zintle, abadlali beqonga bathatha ukonwatyiswa kwiindawo eziphakamileyo (ngokwenyani iindwendwe ngelixa zibekwe ematyaleni), nokunye okuninzi. Iqela lihamba ngaphezulu nangaphaya ukukhathalela iindwendwe kunye nokubonisa indlela ubushushu babo obufudumele ngayo. Sonke sidinga i-R & R encinci kunye nezinto ezithile ezakhelwe-ngaphakathi, kwaye iiSandals kunye neelwandle zikulungele ukuhambisa ngaphezulu!
Thatha uthando lwakho kwiindawo eziphakamileyo kwaye uvuselele ukuthandana kwi IPenthouse Skypool Butler Suite kwiSandals Grenada.
Ubuhlobo, ubuso obutsha kunye neendwendwe ezithembekileyo eziye zaba lusapho: #BackToHappy
Akunakuyikhanyela: i-oasis yezandi ezibini ezithandekayo-zilungile ngoku. Ngenxa yokuba iiSandals ziluphawu oluthembekileyo phantse iminyaka engama-40 ngoku, izibini kunye neentsapho zithatha iipasipoti zabo kwaye babalekela kwiparadesi kuba befuna ukubuyela ekwenzeni oko kubonwabisa.
Fumana #BackToHappy kwaye udibanise ilanga laseCaribbean kwiiNdawo zokuHlala zeSandals.
Kuzo zonke iiholide, iindwendwe zinokubonwa zonwabile kwakhona, ziphakamisa ilanga laseCaribbean zisuka ngaselunxwemeni ngaselunxwemeni labucala, zinxibelelana kwakhona malunga nokutya kwekhandlela labucala phantsi kweenkwenkwezi, kunye nokuzixhoma emanzini ezibini, ngelixa ujika kwi-piña coladas. Konke oku kuzisa #BackToHappy kwinkqubo.
Sipha ii-cocktails zakho ozithandayo kunye nembono ye-360-degree yolwandle kwi Iimbadada kuNxweme oluseMazantsiUbubanzi beBar yaManzi.
Kuyinyani eyamkelwe kwilizwe liphela ukuba ukuhamba kwenza abantu bonwabe, kwaye iiSandals kunye neeLwandle iiholide zifuna wonke umntu #BackToHappy. Ukusuka kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezinabileyo ezakhiwe zinonxibelelwano lwasentlalweni engqondweni ukuya kwinkonzo engagungqiyo ebeka iindwendwe phambili, iiSandals bezisoloko ziyinkokeli eyomeleleyo kushishino lokubuka iindwendwe. Isibini ngokudibanisa abasebenzi kunye nabatyeleli abangenakuthelekiswa nanto kunye neendawo zokunethezeka ezibandakanya konke kunye neendawo ezinomdla kakhulu emhlabeni… ngoku, yinto esinokonwaba sonke ngayo!
Ukulungele ukongeza ulonwabo lwakho kunye nokuvuselela uthando lwakho lweparadesi? Funda ngakumbi malunga nokucwangcisa i iholide ebandakanya konke kunye neembadada or Iindawo zokutyela elunxwemeni Ngoku.